The Time Machine (2002) | MM Movie Store
အခြိနျ ဆိုတာ လူတှအေတှကျ အရေးပါတဲ့ အရာတဈခုပါ။လူတှေ အခြိနျတှကေို ဖွတျသနျးလာကတြယျ။ကြျောဖွတျသှားကတြယျ။နောကျတဈနရေ့ောကျတဲ့ အခါမှာ အရငျနကေ့ အမှားတှရေဲ့ အကြိုးဆကျတှရေလာဒျတှကေို ကွုံရတဲ့ အခါ ငါ အရငျ အခြိနျတှကေို ပွနျသှားလို့ရရငျ ကောငျးမှာ ဆိုပွီး တှေးတကျကပြါတယျ။
အဲ့အတှေးတှကေနေ စပွီး Time Travel အခြိနျခရီးသှားခွငျး ဆိုတဲ့ စိတျကူးစိတျသနျးတှဖွေဈလာပါတယျ။နှဈပေါငျးမြားစှာ ခတျေပေါငျးမြားစှာ ဖွတျသနျးပွီးတာတောငျ ဒီနအေ့ထိ လူတှစေိတျကူးယဉျနကေဆြဲ ပါပဲ။
H.G Wells ရဲ့ နာမညျကြျော ဝတ်ထု ကို ပွနျရိုကျကူးထားတဲ့ ဒီဇာတျကားဟာဆိုရငျလညျး Time Travel အကွောငျးကို ရိုကျကူးထားတာပါ။ပါမောက်ခ အလကျဇန်ဒား ဟာဆိုရငျ ထူးခြှနျတဲ့အလုပျကွိုးစားတကျတဲ့ သိပ်ပံပညာရှငျတဈယောကျပါ။သူ့ဘဝဟာအေးဆေး ဆိတျငွိမျပွီး သူ့ကြောငျးသားတှသေူ့သုတသေနတှေ နဲ့ ပြျောမှနေ့တေကျသူပါ။
သူဟာ မကွာခငျမှာသူခဈြရတဲ့ ခဈြသူဖွဈတဲ့ အမျမာ ကိုလကျထပျခှငျ့တောငျးတော့မှာပါ။ဘဝက ပြျောရှငျစရာအတိပေါ့ဗြာ။
ဒါပမေဲ့ ဘ၀ ဆိုတာ ထငျမထားတာတှဖွေဈလာတကျတဲ့ ဆိုတဲ့ အတိုငျး သူလကျထပျခှငျ့တောငျးနစေဉျမှာပဲ သူ့ကောငျမလေးကို ဆုံးရှုံးလိုကျရပါတယျ။ခဈြသူကို ဆုံးရှုံးလိုကျရတဲ့ အလကျဇန်ဒားတဈယောကျ အဲ့အခြိနျကို ပွနျသှားပွီး အဲ့ဖွဈရပျကို ပွောငျးလဲဖို့ ကွိုးစားပါတယျ။
သူဟာ အခြိနျခရီးသှားစကျကို ထှငျပွီးသှားပွောငျးလဲပါတော့တယျ။ဒါပမေဲ့ …..သူဟာသူ့ကောငျမလေးကို ကယျတငျနိုငျမှာလား….သူအခြိနျခရီးသှားစကျနဲ့ ဘယျတှေ ကို သှားအုံးမလဲ ….
စတာတှကေို စိတျလှုပျရှားဖှယျ ကွညျ့ရှု့ခံစားရမှာပါ။
အချိန် ဆိုတာ လူတွေအတွက် အရေးပါတဲ့ အရာတစ်ခုပါ။လူတွေ အချိန်တွေကို ဖြတ်သန်းလာကျတယ်။ကျော်ဖြတ်သွားကျတယ်။နောက်တစ်နေ့ရောက်တဲ့ အခါမှာ အရင်နေ့က အမှားတွေရဲ့ အကျိုးဆက်တွေရလာဒ်တွေကို ကြုံရတဲ့ အခါ ငါ အရင် အချိန်တွေကို ပြန်သွားလို့ရရင် ကောင်းမှာ ဆိုပြီး တွေးတက်ကျပါတယ်။
အဲ့အတွေးတွေကနေ စပြီး Time Travel အချိန်ခရီးသွားခြင်း ဆိုတဲ့ စိတ်ကူးစိတ်သန်းတွေဖြစ်လာပါတယ်။နှစ်ပေါင်းများစွာ ခေတ်ပေါင်းများစွာ ဖြတ်သန်းပြီးတာတောင် ဒီနေ့အထိ လူတွေစိတ်ကူးယဉ်နေကျဆဲ ပါပဲ။
H.G Wells ရဲ့ နာမည်ကျော် ဝတ္ထု ကို ပြန်ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဒီဇာတ်ကားဟာဆိုရင်လည်း Time Travel အကြောင်းကို ရိုက်ကူးထားတာပါ။ပါမောက္ခ အလက်ဇန္ဒား ဟာဆိုရင် ထူးချွန်တဲ့အလုပ်ကြိုးစားတက်တဲ့ သိပ္ပံပညာရှင်တစ်ယောက်ပါ။သူ့ဘဝဟာအေးဆေး ဆိတ်ငြိမ်ပြီး သူ့ကျောင်းသားတွေသူ့သုတေသနတွေ နဲ့ ပျော်မွေ့နေတက်သူပါ။
သူဟာ မကြာခင်မှာသူချစ်ရတဲ့ ချစ်သူဖြစ်တဲ့ အမ်မာ ကိုလက်ထပ်ခွင့်တောင်းတော့မှာပါ။ဘဝက ပျော်ရွှင်စရာအတိပေါ့ဗျာ။
ဒါပေမဲ့ ဘ၀ ဆိုတာ ထင်မထားတာတွေဖြစ်လာတက်တဲ့ ဆိုတဲ့ အတိုင်း သူလက်ထပ်ခွင့်တောင်းနေစဉ်မှာပဲ သူ့ကောင်မလေးကို ဆုံးရှုံးလိုက်ရပါတယ်။ချစ်သူကို ဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့ အလက်ဇန္ဒားတစ်ယောက် အဲ့အချိန်ကို ပြန်သွားပြီး အဲ့ဖြစ်ရပ်ကို ပြောင်းလဲဖို့ ကြိုးစားပါတယ်။
သူဟာ အချိန်ခရီးသွားစက်ကို ထွင်ပြီးသွားပြောင်းလဲပါတော့တယ်။ဒါပေမဲ့ …..သူဟာသူ့ကောင်မလေးကို ကယ်တင်နိုင်မှာလား….သူအချိန်ခရီးသွားစက်နဲ့ ဘယ်တွေ ကို သွားအုံးမလဲ ….
စတာတွေကို စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် ကြည့်ရှု့ခံစားရမှာပါ။